ရှင်စောကြီး - ဝီကီပီးဒီးယား
ရှင်စောကြီး သည် အင်းဝဘုရင် မင်းကြီးစွာစော်ကဲ၏ မိဖုရားခေါင် တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ သူမသည် ပင်းယဘုရင်များဖြစ်သော လေးစီးရှင် ကျော်စွာနှင့် နရသူ (မောပါမင်း)တို့၏ မိဖုရားလည်း ဖြစ်သည်။ သူမသည် စစ်ကိုင်းထီးနန်း တည်ထောင်သူ အသင်္ခယာ စောယွန်း၏ မြေးတော် ဖြစ်ပြီး၊ အင်းဝထီးနန်း တည်ထောင်သူ သတိုးမင်းဖျားနှင့် မောင်နှမ တော်စပ်သည်။ သူမသည် မင်းကြီးစွာစော်ကဲ၏ မြောက်နန်းမတော် မိဖုရားဖြစ်ပြီး ပင်းယကို စားရသည်။ မိဖုရားခေါင် ခမည်းမိလွန်သော် တောင်နန်းမတော် မိဖုရား ဖြစ်လာခဲ့သည်။[note ၃]
c. ၁၃၉၀ ဆယ်စုနှစ် – ဧပြီ ၁၄၀၀
အင်းဝ မြောက်နန်းမတော် မိဖုရား
၅ စက်တင်ဘာ ၁၃၆၇ – c. ၁၃၉၀ ဆယ်စုနှစ်
၁၉ မတ် ၁၃၅၉ – မေ ၁၃၆၄
၁၄၀၁ နောက်ပိုင်း[note ၁]
လေးစီးရှင် ကျော်စွာ (၁၃၅၇–၅၉)
နရသူ (မောပါမင်း) (၁၃၅၉–၆၄)
စွာစော်ကဲလွန်ပြီးနောက် နန်းတက်သော ဆင်ဖြူရှင်တရဖျားသည် မိဖုရားရှင်စောကြီး၏ သားတော်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရာဇဝင်သစ်ကျမ်းတွင် ခေတ်ပြိုင်ကျောက်စာတစ်ခုအား ကိုးကား၍ ဖော်ပြရာတွင် ဆင်ဖြူရှင်တရဖျားသည် ရှင်စောကြီး၏ သားတော်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် မှန်နန်းရာဇဝင် က အဆိုပါအချက်ကို ငြင်းပယ်ကာ ယခင်ရာဇဝင်ကျမ်းများနှင့် ဆန့်ကျင်ကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။ မှန်နန်းရာဇဝင် က ရှင်စောကြီး၏ သားသမီးနှစ်ဦးဖြစ်သော စောမြတ်ကဲ[note ၄] နှင့် စောဆွေနှစ်တို့ကိုသာ ဖော်ပြထားသည်။
အောက်ပါတို့သည် မှန်နန်းရာဇဝင်လာ မိဖုရားရှင်စောကြီး၏ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်များ ဖြစ်သည်။ သူမသည် ပုဂံနှင့် ပင်းယမင်းမျိုးမင်းနွယ်တို့မှ ဆင်းသက်လာသည်။ သူမ၏ ဖခင်သည် တကောင်းမင်းမျိုးမင်းနွယ်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်မှအပ သူမ၏ မိဘများအကြောင်းကို မသိရပေ။
မိဖုရား စောကြီး၏ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်များ
၁၂။ တစ်စီးရှင် သီဟသူ
၆။ အသင်္ခယာ စောယွန်း
၁၅။ စောစိုး (ပုဂံ)
↑ (မှန်နန်း အတွဲ ၁၊ ၂၀၀၃၊ စာ ၄၃၅): ခေတ်ပြိုင်ကျောက်စာများအရ သူမသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၇၆၃ (ခရစ် ၁၄၀၁/၀၂) အထိ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေသေးသည်။
↑ ရာဇဝင်ကျမ်းများ (မှန်နန်းအတွဲ ၁၊ ၂၀၀၃၊ စာ ၃၉၂)အရ သူမ ဖခင်၏ ဘွဲ့မှာ သတိုးဆင်ထိန်း ဖြစ်သည်။ ၁၃၉၈ ဇွန် ၂၆ (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၇၆၀ ဝါဆိုလဆန်း ၁၂ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင် ရေးထိုးခဲ့သော ကျောက်စာတစ်ခုအရ (Taw, Frorchhammer 1899: 164) သူမ ဖခင်၏ အမည်မှာ စစ်ကိုင်းမြို့စား အသင်္ချာ ဖြစ်သည်။
↑ ကျောက်စာအထောက်အထားများအရ ခမည်းမိသည် ၁၃၈၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၇၄၉ ပြာသိုလဆန်း ၁၀ ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူး) အထိ သက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့ပြီး (Taw, Forchhammer 1899: 152) ရှင်စောကြီးအား ၁၃၉၈ ဇွန်လ ၁၃ (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၇၆၀ ဝါဆိုလဆန်း ၁၂၊ ဗုဒ္ဓဟူး)နေ့တွင် မိဖုရားခေါင်အဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။(Taw, Forchhammer 1899: 164)
↑ (Taw, Frorchhammer 1899: 164): စောမြတ်ကဲသည် ၁၃၉၈ တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ဘုရင်နှင့် မိဖုရားတို့က သမီးတော်အား ရည်စူးကာ တံတားဦးအနီးတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ဆောင်ကို ၁၃၉၈ ဇွန် ၂၆ တွင် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
↑ မှန်နန်း အတွဲ ၁၊ ၂၀၀၃၊ စာ ၃၈၄–၃၈၅
↑ ရာဇဝင်သစ် အတွဲ ၁၊ ၂၀၁၂၊ စာ ၁၇၀
↑ မှန်နန်း အတွဲ ၁၊ ၂၀၀၃၊ စာ ၄၀၄
↑ မှန်နန်း အတွဲ ၁၊ ၂၀၀၃၊ စာ ၄၃၅
↑ မှန်နန်း အတွဲ ၁၊ ၂၀၀၃၊ စာ ၄၃၆
↑ မှန်နန်း အတွဲ ၁၊ ၂၀၀၃၊ စာ ၃၉၂
တွင်းသင်းတိုက်ဝန် မဟာစည်သူ (၂၀၁၂) ။ ကျော်ဝင်း; သိန်းလှိုင် (eds.)။ Yazawin Thit (Burmeseဘာသာစကားဖြင့်)။ ၁–၃ (ဒုတိယအကြိမ် ed.)။ Yangon: ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်။ CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
Taw၊ Sein Ko; Emanuel Forchhammer (1899)။ Inscriptions of Pagan, Pinya and Ava: Translation, with Notes။ Archaeological Survey of India။
မွေးဖွား c. ၁၃၄၇ ကွယ်လွန် c. ၁၄၀၀ ဆယ်စုနှစ်
ခမည်းမိ အင်းဝ မိဖုရားခေါင်
c. ၁၃၉၀ ဆယ်စုနှစ်–၁၄၀၀ ဆက်ခံသူ
ဘွဲ့အသစ် အင်းဝ မြောက်နန်းမတော် မိဖုရား
၁၃၆၇–c. ၁၃၉၀ ဆယ်စုနှစ် ဆက်ခံသူ
၁၉ မတ်လ ၁၃၅၉ – မေ ၁၃၆၄ ဆက်ခံသူ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှင်စောကြီး&oldid=678903" မှ ရယူရန်
၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။